Daawo Video:Ra’iisul Wasaaaraha “Guddoomiyihii Shaqadiisa Qabsan Waaya, Shaqada Halaga Ceyriyo” | Kalshaale
Daawo Video:Ra’iisul Wasaaaraha “Guddoomiyihii Shaqadiisa Qabsan Waaya, Shaqada Halaga Ceyriyo”
Apr 15, 2018 - 5 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa digniin u jeediyay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir oo xilligan wajahaya culeysyo uga imaanaya Madaxda dowladda, kaddib markii lagu wargeliyay in wixii hada ka bilowda lagula xisaabtami doono shaqadeeda.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin cid kasta oo shaqadeeda qabsan weyda ama laab-laab lagu arko, isagoo faray Talisyada Ciidanka iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir cidii howsheeda qabsan weyda in shaqada laga ceyriyo.
Libaax libaax dhalay. Tolow yaa lagu maqan yahay.
Raysulwasaaraha xamar iyo xamar daye.
Mudane kheyre dadka reer muqdisho ee lagu wada dul nool yahay halla daweeyo hadaad dooneysid in ay wax idiin hagagaan.
Wexey wayeen xuquuqdii ay lahayeen wexey aheyd in ay helaan xuquuq dheraad ah madaama ay yihiin kuwa kaligood bixiyo xuquuqda lagu leeyahay muwaadinka.
Ninka ay ku dulnooshahay 5 somaliyeed. Ee lagu yiri wax xuquuq ah malihid sidebuu kuula sheqeynayaa?
CANSHUURTA DHIIB ADOON CASHEYN CID KALE AAN KU CAAWIYEE.
42.5 Milyan oo doolar ayaa laga qaaday 3 bil Gudahooda shacabka muqdisho mana loogu Qaban adeegyadii asaasiga u ahaa bulshada
G\_banaadir. Sidaa wadooyinka, Nadaafada, Caafimaadka. IWM
Muqdisho mar walba waxay marti utahay in Xaqeedii la leexsado.
ASC cashuurta reer muqdisho laga qaado muqdisho baa wax loogu qabta waana waajib aduunka dhan bixiyo cidna lagama baryo xataa lanama waydiiyo toos baa paycheque looga jaraa, cashuurta la bixiyo buu wadan ku shaqeeya police ka la siiya macalimiinta la siiya marka kuwan qurbaha jooga ee nabada haystaa cashuur dadkale laga soo jirey baad qaadatiin ama nabadgelyadiina lagu ilaali yahay ee dhibta dhaafa oo ku dhiirigalya in ay shacabka cashuurta bixiyan
Asc dhamaan. @ Garqaad sxb ma jirto magaalo ku taala Soomaaliya oo loogu adeega canshuurteeda. Tusaale kugu filan oo waafi ah iga hoo.
– Hargeysa looguma adeega canshuurteeda.
-Baydhabo sidoo kale.
-Kista sidoo kale
-kuwa ka yaryarna warkodaba iska ilow.
Markii la doortay Xasan Sheekh aad ayaan u farxay. Waayo maxuu noo balanqaaday (bacdu insh’allaah) inuu xoogga saaridoono amniga. Mudadaas afarta sano ahna lagu diyaarindoono dhawrkan WALXOOD :
-Amniga guud ee dalka oo sugan.
-Daltuurka oo la dhameystira.
-Federalkii iyo maamulgoboleedyada oo la jaangooyo.
-Cantuurtii oo iyana la jaangooyo.
-xisbiyada oo la Sharciyeeyo.
-Doorasho qof iyo cod ah.
__Xasan wuu dadaalay, lkn ma uusan gaarin hadafkiisii.
Waxaa yimid Farmaajo isaguna waxaan ka sugeynay dhamaan intii uu tiigsanayey Xasan ee uu ka gaariwaayey iyo waliba inuu ku daro dhawr arrimood oo iyaguna muhiim ah sida :
-Kaabo dhaqaale iyo shaqo abuur.
-Cod u qaadidda Daltuurka.
-Iyo, iyo, iyo.
Labada madaxweynaba waxay ilaa iyo maanta ka soo DHALAALIWAAYEEN oo aysan wali wax ka qaban xasilinta AMNIGA guud ee dalka. Dhamaan sharuudihii kalena qodobkaas ayey ku xiran yihiin. Waxaana nagu soo beegan doorasho kale oo 4.5 iyo qaab qabiil ah.
Hadaba waxaa muhiim ah in la fikiro oo la fahmo ciladda halka ay ka jirto.
== Maxay tahay cillada, qof walba iyo fikirkiisa. Soo daaya fikirkiina.
== Soo dhawaada mudaneyaal iyo marwooyin==
ASC dhamaantiin, iyo Garqaad iyo C/Raxmaan,
Brother C/Raxmaan, waa sida aad sheegtay madaxweeynahiin hore waxa uu balanqaaday badankood sida security in eey u tahay number One, waxba kama qaban, Dabcan, waxyaabo kale waa jirtaa uu qabtay. Sidoo kale, madaxweeynaha hadeer ee dhameeystay Hal sanno, Mr. Farmaajo, uma muuqda nin wax ka qabanaya baahida koowaad ee dadka Somaliyeed leeyahiin oo ah “amniga” Dabcan waa dhici kartaa in uu waxyaabo kale qabto, laakiin, waa in la fahmaa, waxyaabaha ugu muhiimsan iyo prioritiga waxa lasiinayo.